ကလေးအမြွှာမွေးရင် ပြာနဲ့ဖုံး စီရင်ပြီး မိဘတွေကို လေးဘက်ထောက် သွားခိုင်းတဲ့ ဓလေ့ဆိုးရှိတဲ့ရွာ - Zet Star
ကလေးအမြွှာမွေးရင် ပြာနဲ့ဖုံး စီရင်ပြီး မိဘတွေကို လေးဘက်ထောက် သွားခိုင်းတဲ့ ဓလေ့ဆိုးရှိတဲ့ရွာ
ကလေးအမြွှာမွေးရင် ကလေးတွေကို ပြာနဲ့ဖုံး စီရင်ပစ်ပြီး မိဘတွေကို လေးဘက်ထောက်သွားစေခြင်းနဲ့ ရွာကနှင်ထုတ်တဲ့ နန့်မွဲရွာက ကလေးအမြွှာလေးတွေကို အသက်ရှင်အောင် ပြည်သူ့ရဲဝန်ထမ်း ရဲအုပ် ဦးဇော်မင်းထွန်းဦးဆောင်ကယ်တင်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝေးလံသီခေါင် အစိုးရရဲ့ဥပဒေ လက်လှမ်းမမီနိုင်လောက်အောင် ကွာဝေးတဲ့နေရာတွေမှာ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ၊ မိဘရိုးရာ အစဉ်အလာအစွဲတွေက ကြီးစိုးနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုအဖြစ်အပျက်တွေ တည်ရှိရာ ရွာကလေးက ကျိုင်းတုံခရိုင် မိုင်းခတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ နန့်မွဲရွာပါ။
ဒီရွာနဲ့ နံဘေးပတ်ဝန်းကျင်က တခြား ရွာနှစ်ရွာမှာ နတ်စားတဲ့ဓလေ့ ကြီးစိုးနေဆဲဖြစ်ပြီး ကလေးအမြွှာမွေးရင်ကို အပြစ်ကြီးကျူးလွန်တယ်လို့ ယူဆလက်ခံထားပါတယ်။
သား/သမီး အမြွှာမွေးရင် ကလေးတွေကို ပြာနဲ့ဖုံးပြီး စီရင်၊ ကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကို ကျတော့ လေးဘက်ထောက်စေပြီး ရွာကနှင်ထုတ်တဲ့ဓလေ့ကို ကျင့်သုံးတဲ့ နန့်မွဲရွာမှာ အခုတော့ ပထမဆုံး အသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့ အမြွှာသမီးလေးနှစ်ယောက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။
ဒီလို ရှေးရိုးစွဲတွေကို တွန်းလှန်ပြီး အမြွှာသမီးငယ်လေးနှစ်ယောက် အသက်ရှင်ခွင့်ရအောင်၊ ရွာထဲဝင်ခွင့်ရအောင် အခက်အခဲတွေကြားကနေ ကြိုးပမ်းခဲ့သူကတော့ ပြည်သူ့ရဲဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရဲအုပ် ဦးဇော်မင်းထွန်းပါပဲ။ အမြွှာမွေးမိရင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ဆက်ဆံတတ်တဲ့ နေရာဒေသမှာ အမြွှာသမီးလေးနှစ်ယောက် ပထမဦးဆုံးစတင် အသက်ရှင်ရပ်တည်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
← ကိုဗစ်ကို ပိုက်ဆံယူပြီး အပြင်မှာ စစ်ပေးတဲ့ ဆရာဝန် မှားလား? မှန်လား?
သူဌေးနိုင်ငံတွေရဲ့ ကာကွယ်ဆေး အလွန်အကျွံ ဝယ်ယူမှုနဲ့ ၂၀၂၁ မှာ တောင့်ထားရမယ့် မြန်မာပြည် →